Ajụjụ ọnụ na gburugburu COVID-19 na mpaghara mpaghara Afrika - AfricaArXiv
bipụtara Ndi otuAAAXXiv on 25th March 2020 25th March 2020
Mgbasa ozi banyere omume kacha mma na aro omume iji belata mgbasa nke coronavirus bụ nke enyerekarị na Bekee. A na-asụ ihe dị ka asụsụ 2000 na mpaghara Africa na ndị mmadụ nwere ikike ịgwa ha n'asụsụ ha banyere ihe na-eme na otu ha ga-esi chebe onwe ha, ezinụlọ ha, ndị enyi, na ndị ọrụ ibe.
Asụsụ Africa na weebụsaịtị anyị
You hụrụ na ị nwere ike ịgbanwe asụsụ websaịtị anyị? Ugbu a, anyị na-enye ọdịnaya anyị n'asụsụ ndị a:
French German Hausa Hindi igbo
Malagasy Portuguese Sesotho Somalia Anyanwu
Swahili Xhosa Yoruba Zulu
Biko rụba ama: Site na ntughari webusaiti nke AfricaArXiv sitere n'aka nke GTranslate.io site na wp ngwa mgbakwunye si Bekee n’ime asụsụ iri na itolu. Ntụgharị ahụ dị mma mana ezughị oke. You nwere ike inyere anyị aka melite ederede sụgharịa na weebụsaịtị anyị? Biko ziga ozi na onyinye@africarxiv.org. | Ntụziaka: github.com/AfricArxiv/…/translations.md
Gụkwuo banyere asụsụ dị iche iche na nkwukọrịta agụmakwụkwọ Africa na africarxiv.org/languages/.
Biko chọta n'okpuru ozi nyere site na WHO mpaghara ụlọ ọrụ maka Africa // enweta na March 25, 2020:
WHO Ajụjụ na A na coronaviruses (COVID-19)
Mba Africa na-esite na njikere COVID-19 meghachi omume dịka ọtụtụ na-egosi ikpe
Ohaneze ụwa na-agbado iji nwayọ ma mechaa gbasaa mgbasa nke COVID-19, ọrịa nke gburu puku kwuru puku mmadụ ma daa ọrịa puku kwuru iri puku ndị ọzọ. Na Africa, nje ahụ agbasaala n'ọtụtụ mba n'ime izu. Gọọmentị na ndị ọrụ ahụ ike n'ofe kọntinenti ahụ na-agba mbọ igbochi ọrịa na-efe efe zuru ebe niile.
Site na mmalite ntiwapụ ahụ, Healthtù Ahụ Ike (wa na-akwado gọọmentị Africa maka nchọpụta n'oge site na ịnye ọtụtụ puku ngwa nyocha COVID-19 na mba, na-azụ ọtụtụ ndị ọrụ ahụike na iwusi nlebara anya na obodo. Mba iri anọ na asaa na mpaghara mba ụwa nke WHO nwere ike ịnwale COVID-19. Na nmalite nke ntiwapụ ahụ naanị mmadụ abụọ nwere ike ime ya.
Ndi WHO nyere ntuzi aka na obodo, nke a na-emelite oge obula iburu n'uche onodu ogugu a. Ndụmọdụ ndị a gụnyere usoro dịka iche, ịkpọghachite ụmụ amaala na ịdị njikere n'ebe ọrụ. Organizationtù ahụ na-ejikwa ọtụtụ ndị ọkachamara na-arụ ọrụ iji hazie mgbalị ndị na-eme nchọpụta mpaghara, ọrịa na-efe efe, ihe nlele, nyocha, ọgwụgwọ na ọgwụgwọ, na ụzọ ndị ọzọ iji mata, jikwaa ọrịa ahụ na igbochi mgbasa mgbasa.
WHO na-enye mba ndị aka metụtara nkwado ngwaọrụ kọmputa, yabụ ndị isi ahụike mba nwere ike ịghọta nke ọma ntiwapụ nke mba ha. Prekwadebe na nzaghachi nye ọrịa na-efe efe na-enye ntọala siri ike maka ọtụtụ mba Africa iji gbasaa mgbasa nke COVID-19.
Di nkpa, uzo mgbochi mbu ndi mmadu n’obodo na aka bu ihe kachasi ike igbochi mgbasa COVID-19. WHO na-enyere ndị ọchịchị ime obodo aka ịgọnarị ozi redio na ebe TV na-eme ka ọha na eze mara ihe ọghọm nke COVID-19 yana ihe ndị aga-ewere. Organizationtù a na-enyekwa aka na-alụ ọgụ ma na-eduzi mba dị iche iche maka ịtọlite ​​ebe a na-akpọ oku iji hụ na a gwara ndị mmadụ.
Ajuju na azịza na coronaviruses (COVID-19)
>> onye.int/news-room/qa-detail/qa-coronaviruses // 9 March 2020 | Ajụjụ na Azịza
WHO na-enyocha ma na-azaghachi ntiwapụ a. A ga-emelite Q&A a ka amara ihe banyere COVID-19, otu o si agbasa na otu o si emetụta ndị mmadụ n’ụwa niile. Maka ama ndị ọzọ, na-eleghachi anya na mbido Peeji nke coronavirus nke WHO.
Gịnị bụ coronavirus?
Coronaviruses bụ nnukwu ezinụlọ nke nje nke nwere ike ibute ọrịa na anụmanụ ma ọ bụ mmadụ. N'ime mmadụ, a ma ọtụtụ ihe coronaviruses na-akpata ọrịa akụkụ iku ume na-esite na oyi na-atụkarị na ọrịa ndị ọzọ siri ike dị ka Middle East Respiratory Syndrome (MERS) na Nnukwu Ntugharị Nnukwu (SARS). Ọrịa Coronavirus chọpụtara kachasị achọpụta na nso nso a na-akpata ọrịa coronavirus COVID-19.
Kedu ihe bụ COVID-19?
COVID-19 bụ ọrịa na-efe efe nke ọnya na-achọpụta ọhụhụ nke coronavirus. Ọrịa ọhụrụ na ọrịa a amaghị ama tupu ntiwapụ ahụ amalite na Wuhan, China, na December 2019.
Kedu ihe mgbaàmà nke COVID-19?
Ihe mgbaàmà kachasị nke COVID-19 bụ ahụ ọkụ, ike ọgwụgwụ, na ụkwara akọrọ. Fọdụ ndị ọrịa nwere ike ịnwe ụfụ na ihe mgbu, imi imi, imi na-agba agba, akpịrị akpịrị ma ọ bụ afọ ọsịsa. Mgbaàmà ndị a na-adịkarị nwayọọ ma malite nke nta nke nta. Fọdụ ndị na-ebute ọrịa mana ha anaghị ebute ihe mgbaàmà ọ bụla, ọ naghị adị ha mma. Imirikiti mmadụ (ihe dị ka 80%) na-agbake n'ọrịa ahụ n'achọghị ọgwụgwọ pụrụ iche. Ihe dị ka mmadụ 1 n'ime mmadụ isii ọ bụla na-enweta COVID-6 na-arịa oke ọrịa ma na-enwe nsogbu iku ume. Ndị agadi, na ndị nwere nsogbu ahụike dịka ọbara mgbali elu, nsogbu obi ma ọ bụ ọrịa shuga, nwere ike ibute ọrịa siri ike. Ndị mmadụ nwere ahụ ọkụ, ụkwara na nsogbu iku ume kwesịrị ịchọ nlekọta ahụike.
Kedu ka COVID-19 si agbasa?
Ndi mmadu nwere ike ijide COVID-19 n'aka ndi ozo bu oria. Ọrịa ahụ nwere ike ibunye site na mmadụ gaa na mmiri site na obere ụmụ irighiri mmiri site na imi ma ọ bụ ọnụ nke na-agbasa mgbe onye nwere COVID-19 ụkwara ma ọ bụ iku ume. Ihe mmirichukwu ndị a na-adọkpụsị n’elu ihe mmadụ na mbara ya. Ndị ọzọ na-ejide COVID-19 site na imetụ ihe ndị a ma ọ bụ ihe dị iche iche aka, wee metụ anya ha, imi ma ọ bụ ọnụ ha. Ndị mmadụ nwekwara ike ijide COVID-19 ma ọ bụrụ na ha na-eku ume site na mmiri site na onye nwere COVID-19 nke na-asụ ma ọ bụ na-ekupụpu ụmụ irighiri mmiri. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ịhapụ ihe karịrị 1 mita (3 ụkwụ) n’ebe onye ahụ na-arịa ọrịa nọ.
WHO na-enyocha nyocha na-aga n'ihu banyere ụzọ COVID-19 si agbasa ma ga-aga n'ihu na-ekerịta nyocha ndị emelitere.
Enwere ike ibunye nje nke na-akpata COVID-19 site na ikuku?
Nnyocha ndị e mere taa na-egosi na nje a na-ebute COVID-19 bụ nke a na-ebute site na ịkpọtụrụ ụmụ irighiri akụkụ iku ume karịa site na ikuku. Lee azịza gara aga na “Kedu ka COVID-19 si agbasa?”
Enwere ike ijide CoVID-19 n'aka onye na-enweghị mgbaàmà ọ bụla?
Mainzọ kachasị si agbasa n'ọrịa a bụ site na ụmụ irighiri iku ume nke onye ụkwara na-achụpụ. Ihe ize ndụ nke ịnweta COVID-19 n'aka onye na-enweghị mgbaàmà ọ bụla dị ala. Otú ọ dị, ọtụtụ ndị nwere COVID-19 na-enweta naanị mgbaàmà dị nro. Nke a bụ eziokwu karịsịa na mmalite nke ọrịa. Ya mere enwere ike ijide COVID-19 n'aka onye nwere, dịka ọmụmaatụ, naanị ụkwara nta ma ọ naghị arịa ọrịa. Onye WHO na-enyocha nyocha na-aga n'ihu na oge nke nnyefe nke COVID-19 ma ga-aga n'ihu ịkekọrịta nyocha ọhụụ.
Enwere m ike ị nweta COVID-19 site na ọrịa nke onye ọrịa?
Ihe ọghọm ị ga - enweta COVID-19 site na ọrịa nke onye butere ọrịa ahụ dị ka ọ dị ala. Ọ bụ ezie na nyocha izizi na-egosi na nje nwere ike ịnọ na ọrịa n'ọnọdụ ụfọdụ, ịgbasa n'ụzọ a abụghị akụkụ bụ isi nke ntiwapụ ahụ. WHO na-enyocha nyocha na-aga n'ihu banyere ụzọ COVID-19 si agbasa ma ga-aga n'ihu na-ekerịta nchọpụta ọhụrụ. Maka na nke a bụ ihe egwu, ma, ọ bụ ihe ọzọ iji sachaa aka mgbe niile, mgbe ị gachara ụlọ ịsa ahụ na tupu i rie nri.
Isnye ga - adaba n 'oria oria ojoo?
Ọ bụ ezie na anyị ka na-amụ banyere otu COVID-2019 si emetụta ndị mmadụ, ndị agadi na ndị nwere ọnọdụ ahụike dị adị (dịka ọbara mgbali elu, ọrịa obi, ọrịa ngụ, ọrịa kansa ma ọ bụ ọrịa shuga) na-egosi na ha na-arịa ọrịa siri ike karịa ndị ọzọ.
Ọgwụ nje dị irè iji gbochie ma ọ bụ ọgwụgwọ COVID-19?
Mba. Ọgwụ nje anaghị arụ ọrụ megide nje, naanị ha na-arụ ọrụ na ọrịa nje. Ọ bụ nje na-akpata COVID-19, yabụ ọgwụ nje anaghị arụ ọrụ. Ekwesighi iji ọgwụ nje mee ihe iji gbochie ma ọ bụ gwọọ COVID-19. Ha ga-eji dị ka onye dọkịta gwara ya ka ọ gwọọ ọrịa nje.
COVID-19 bụ otu SARS?
Mba. Nje virus nke butere COVID-19 na nke kpatara ntiwapụ nke ọrịa siri ike na oke ihe (SARS) na 2003 metụtara ibe ya, mana ọrịa ndị ha na - ebute bụ ihe dị iche.
SARS dị egwu ma bute ọrịa karịa COVID-19. Onweghi oria SARS n'ime uwa obula kemgbe 2003.
Kedu ihe m ga - eme iji chebe onwe m ma gbochie mgbasa nke ọrịa?
Usoro nchekwa maka onye ọ bụla
Mara ihe omuma ohuru banyere ntiwapụ nke COVID-19, dị na weebụsaịtị WHO yana site na ikike nchekwa obodo na nke obodo gị. Ọtụtụ mba gburugburu ụwa ahụla ebe CVEID-19 na ọtụtụ hụrụ ọrịa ntiwapụ. Ndị ọchịchị nọ na China na ụfọdụ mba ndị ọzọ nwere ihe ịga nke ọma n'ibelata ma ọ bụ ịkwụsị ọpụpụ ha. Agbanyeghị, ọnọdụ ahụ bụ nke a na-akọghị ụdị ya, yabụ na-elele mgbe niile maka ozi kacha ọhụrụ.
Can nwere ike belata ohere ị nwere ibute ọrịa ma ọ bụ gbasaa COVID-19 site na ịchebe ụfọdụ ụzọ:
Mgbe nile were aka were mmanya were sachaa aka gi ma obu sachaa ya na mmiri.
N'ihi gịnị? Iji ncha na mmiri sachaa aka gị ma ọ bụ iji aka na-a alcoholụ mmanya na-egbu egbu na-egbu nje ndị nwere ike ịdị gị n’aka.
Nwee ma ọ dịkarịa ala 1 mita (3 ụkwụ) anya n'etiti gị na onye ọ bụla nke na-ụkwara ma ọ bụ na -azu.
N'ihi gịnị? Ọ bụrụ na mmadụ sụọ ma ọ bụ sọọsụ ha, ọ na-agbasa ụmụ irighiri mmiri imi ha site na imi ma ọ bụ nke nwere ike ịnwe nje. Ọ bụrụ n ’ị dị ezigbo nso, ị nwere ike iku ume na mmịrị, gụnyere nje COVID-19 ma ọ bụrụ na onye na-arịa ya nwere ọrịa ahụ.
Zere imetụ anya, imi na ọnụ aka.
N'ihi gịnị? Aka metu otutu ihe di elu ma huru oria. Ozugbo mmerụ ahụ, aka nwere ike ibufe nje ahụ na anya gị, imi ma ọ bụ ọnụ gị. Site ebe ahụ, nje nwere ike ịbanye n'ahụ gị ma mee ka ị daa ọrịa.
Gbaa mbọ hụ na gị na ndị niile gbara gị gburugburu, na-eso ezigbo iku ume iku ume. Nke a pụtara ikpuchi egbugbere ọnụ gị ma ọ bụ anụ ahụ kpuchie ọnụ gị na imi gị mgbe ị na-ụkwara ma ọ bụ ịsụsọ. Wepụ anụ ahụ ejirila ya ozugbo.
N'ihi gịnị? Ọkụ na-agbasa nje. Site n'ịgbaso usoro iku ume dị mma ị na - echekwa ndị nọ gị nso nje na-efe efe dị ka oyi, flu na COVID-19.
Nọrọ n'ụlọ ma ọ bụrụ na ahụ adịghị gị. Ọ bụrụ na ị nwere ahụ ọkụ, ụkwara na nsogbu iku ume, chọọ nlekọta ahụike ma kpọọ tupu oge eruo. Soro ntuziaka nke ikike ahụike mpaghara gị.
N'ihi gịnị? Ndị ọchịchị obodo na nke ime obodo ga-enweta ihe ọmụma kachasị ọhụrụ maka ọnọdụ dị na mpaghara gị. Inkpọ ụzọ ga - eme ka onye na - ahụ maka ahụike gị duo gị ozugbo ka ọ banye n'ụlọ ọrụ ahụike dị mma. Nke a ga - echebe gị ma nyere aka gbochie mgbasa nke nje na ọrịa ndị ọzọ.
Nọgide na-enwe ọhụụ na mpaghara COVID-19 kachasị ọhụrụ (obodo ma ọ bụ mpaghara ebe COVID-19 na-agbasa ebe niile). Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee, zere ịga njem - ọkachasị ma ọ bụrụ na ị bụ agadi nwoke ma ọ bụ nwee ọrịa shuga, obi ma ọ bụ ọrịa akpa ume.
N'ihi gịnị? Have nwere ohere dị elu iji jide COVID-19 n'otu n'ime mpaghara ndị a.
Usoro nchebe maka ndị nọ na ma ọ bụ leta gara na nso nso a (ụbọchị 14 gara aga) ebe COVID-19 na-agbasa
Soro ntuziaka edepụtara n’elu (Usoro nchekwa maka onye ọ bụla)
Iche onwe gị site na ịnọrọ n’ụlọ ma ọ bụrụ na ị malite inwe ahụ erughị ala, ọbụlagodi mgbaàmà dị nro dịka isi ọwụwa, ahụ ọkụ (ogo 37.3 C ma ọ bụ karịa) na imi na-agba ntakịrị, ruo mgbe ị ga-agbake. Y’oburu na odi nkpa ka inwere onye wetara gi akuko ma obu laa, dika izuta nri, yikwasiri ihe nkpuchi ka ị ghara ibunye ndi ozo oria.
N'ihi gịnị? Izere ịkpọtụrụ ndị ọzọ na nleta maka ụlọ ọrụ ahụike ga-eme ka akụrụngwa ndị a rụọ ọrụ nke ọma ma nyere gị aka chebe gị na ndị ọzọ enwere ike na COVID-19 na nje ndị ọzọ enwere ike.
Ọ bụrụ na ị nwee ahụ ọkụ, ụkwara na iku ume siri ike, chọọ ndụmọdụ ahụike ngwa ngwa maka nke a nwere ike ịbụ ọrịa na-efe efe ma ọ bụ ọnọdụ ndị ọzọ siri ike. Kpọọ nke ọma ma gwa onye na-eweta gị maka njem ọ bụla ma ọ bụ kpọtụrụ ndị njem.
N'ihi gịnị? Inkpọ ụzọ ga - eme ka onye na - ahụ maka ahụike gị duo gị ozugbo ka ọ banye n'ụlọ ọrụ ahụike dị mma. Nke a ga - enyekwa aka igbochi mgbasa nke COVID-19 yana nje ndị ọzọ.
Kedu ka m ga - esi jide COVID-19?
Ihe ize ndụ ahụ dabere na ebe ị nọ - ma karịa, ma enwere nsogbu COVID-19 na-apụta n'ebe ahụ.
Maka ọtụtụ ndị nọ n'ọtụtụ ebe ihe ize ndụ ịdọrọ COVID-19 ka dị ala. Agbanyeghị, enwere ebe dị ugbu a gburugburu ụwa (obodo ma ọ bụ mpaghara) ebe ọrịa ahụ na-agbasa. Maka ndị bi na, ma ọ bụ na-eleta, mpaghara ndị a nwere ike ịnwe COVID-19 dị elu. Gọọmentị na ndị ọrụ ahụ ike na-eme ihe siri ike oge ọ bụla ịchọpụta ihe gbasara COVID-19 ọhụrụ. Jide n'aka na ị ga-agbaso mgbochi obodo ọ bụla na njem, mmegharị ma ọ bụ nnọkọ buru ibu. Iso ndị na - egbochi ọrịa ọgụ ga - ebelata ohere ị ga - ejide ma ọ bụ gbasaa COVID-19.
Enwere ike ịnwe oria COVID-19 ma kwụsịtụ mgbasa, dịka egosiri na China na ụfọdụ mba ndị ọzọ. O di nwute, ntiwaputa ohuru nwere ike iputa ngwa ngwa. Ọ dị mkpa ịmara ọnọdụ ebe ịnọ ma ọ bụ na-ezube ịga. WHO na-ebipụta mmelite kwa ụbọchị na ọnọdụ COVID-19 n'ụwa niile.
Nwere ike ịhụ ndị a na onye.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
Ogologo oge hà a theaa bụ oge ihe nnabata dị na COVID-19?
Oge “oge ịbanye” pụtara oge n'etiti ijide nje na ịmalite inwe mgbaàmà nke ọrịa. Otutu ubara banyere oge ihe inyoghi di na COVID-19 sitere na ubochi 1-14, otutu kariri ubochi ise. A ga-emelite atụmatụ ndị a ka ị ga-enweta data ndị ọzọ.
Enwere m ike ị nweta COVID-19 n'ụlọ anụ ụlọ m?
Agbanyeghị na enwere otu mgbe nkịta butere ọrịa na Hong Kong, rue taa, enweghị akaebe na nkịta, pusi ma ọ bụ anụ ọ bụla nwere ike ibufe COVID-19. COVID-19 na-agbasa site na nsonye mmiri na-esite na mgbe onye ọrịa butere ọnya, snee, ma ọ bụ kwuo okwu. Iji kpuchido onwe gị, sachaa aka gị ugboro ugboro.
WHO gara n'ihu na-enyocha nyocha ọhụụ banyere nke a na isiokwu COVID-19 ndị ọzọ ma ga-emelite ka achọpụtara ihe ọhụụ.
Ọ dị mma ịnata ngwugwu site na mpaghara ọ bụla ebe a kọọrọ COVID-19?
Ee. Ohere nke onye oria na-emetọ ngwongwo azụmahịa dị ala ma ihe ọ bụla nwere ibute nje na-akpata COVID-19 site na ngwungwu a kwaga, gaa njem, ma kpughee ọnọdụ dị iche iche na ọnọdụ okpomọkụ dịkwa ala.
Ọ ga - echegbu onwe m maka COVID-19?
Ọrịa n'ihi ọrịa COVID-19 dị obere, ọkachasị ụmụaka na ndị okenye. Agbanyeghị, ọ nwere ike ibute ọrịa siri ike: ihe dị ka 1 onye n’ime mmadụ ise ọ bụla jidere ya chọrọ nlekọta ụlọ ọgwụ. Ya mere ọ bụ ihe dị njọ na ndị mmadụ ichegbu onwe ha banyere etu ntiwapụ COVID-5 ga-esi emetụta ha na ndị ha hụrụ n'anya.
Anyị nwere ike tinye ihe ndị na-echegbu anyị n'omume iji chebe onwe anyị, ndị anyị hụrụ n'anya na obodo anyị. Nke mbụ n'ime ọrụ ndị a bụ ịsacha ahụ mgbe niile na ịdị ọcha nke iku ume. Nke abuo, debe ozi ma soro ndụmọdụ nke ndị isi obodo ahụ gụnyere mmachi ọ bụla etinyere na njem, mmegharị na nnọkọ.Lụkwuo gbasara otu esi echebe onwe gị na onye.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
Enwere ọgwụ ma ọ bụ ọgwụgwọ ọ bụla nwere ike igbochi ma ọ bụ gwọọ COVID-19?
Ọ bụ ezie na ụfọdụ ọdịda anyanwụ, ọgwụgwọ ọdịnala ma ọ bụ ọgwụgwọ ụlọ nwere ike inye nkasi obi ma belata mgbaàmà nke COVID-19, enweghị akaebe na ọgwụ ugbu a nwere ike igbochi ma ọ bụ gwọọ ọrịa ahụ. WHO anaghị akwado ọgwụ ịchọrọ onwe ya na ọgwụ ọ bụla, gụnyere ọgwụ nje, dị ka ihe mgbochi ma ọ bụ ọgwụgwọ maka COVID-19. Agbanyeghị, enwere ọtụtụ ọnwụnwa ọgwụgwọ na-aga n'ihu nke gụnyere ọgwụ ọdịda anyanwụ na nke ọdịnala. WHO ga-aga n'ihu na-enye ozi emelitere ozugbo enwere nchọpụta ụlọ ọgwụ.
Enwere ọgwụ mgbochi, ọgwụ ma ọ bụ ọgwụgwọ maka COVID-19?
Ọbụbeghị. Ruo taa, enweghi ọgwụ mgbochi na ọnweghị ọgwụ mgbochi ọ bụla iji gbochie ma ọ bụ gwọọ COVID-2019. Agbanyeghị, ndị ahụ metụtara kwesịrị inweta nlekọta iji belata ihe mgbaàmà. Ekwesịrị ịga ụlọ ndị nwere nnukwu ọrịa n'ụlọ ọgwụ. Ọtụtụ ndị ọrịa na-agbake site na nlekọta nkwado.
A ga-enyocha ọgwụ mgbochi na ọgwụ ụfọdụ akọwapụtara. A na-anwale ha site na nnwale nke ụlọ ọgwụ. WHO na-ahazi mbọ iji mepụta ọgwụ mgbochi yana ọgwụ iji gbochie ma gwọọ COVID-19.
Thezọ kachasị dị mma iji chebe onwe gị na ndị ọzọ megide COVID-19 bụ ịsacha aka gị ugboro ugboro, kpuchie ụkwara gị na egbugbere ọnụ ma ọ bụ anụ ahụ, ma nwee ebe dịkarịa ala otu mita (ụkwụ atọ) site na ndị na-arịa ụkwara. snee. (Lee Usoro nchebe dị mkpa megide coronavirus ọhụrụ).
Ọ kwesịrị m iyi nkpuchi iji chebe onwe m?
Naanị kpuchie ihe mkpuchi ma ọ bụrụ na ị na-arịa ọrịa mgbaàmà COVID-19 (ọkacha ụkwara) ma ọ bụ lekọta onye nwere ike inwe COVID-19. Enwere ike iji otu ihu ihu kpochapụ. Ọ bụrụ na ị naghị arịa ọrịa ma ọ bụ na-elekọta onye na-arịa ọrịa, ị na-eme nkpuchi. Enwere mkpuchi ụkọ n'ụwa niile, yabụ WHO na-agba ndị mmadụ ume ka ha jiri masks jiri amamihe mee ihe.
Onye WHO na - adụ ọdụ ka eji ihe nkpuchi ahụike mee ihe iji zere ịla n'iyi nke akụ dị oke ọnụ na iji ihe nkpuchi (lee Ndụmọdụ banyere ojiji).
Thezọ kachasị dị mma iji chebe onwe gị na ndị ọzọ megide COVID-19 bụ ịsacha aka gị ugboro ugboro, kpuchie ụkwara gị na egbugbere ọnụ ma ọ bụ anụ ahụ ma dowe ebe dịkarịa ala 1 mita (atọ) site na ndị na-arịa ụkwara . Lee ihe nchebe dị mkpa megide coronavirus ọhụrụ maka ozi ndị ọzọ.
Otu esi etinye, ojiji, wepu ma wepu nkpuchi?
Cheta, ihe nkpuchi ga-abụ naanị ndị ọrụ ahụike, ndị na-elekọta ya, na ndị nwere nsogbu iku ume, dị ka ahụ ọkụ na ụkwara.
Tupu imetụ ihe nkpuchi ahụ, jiri aka ncha ma ọ bụ ncha na mmiri mee ka aka gị dị ọcha
Were ihe nkpuchi ahụ ma nyochaa ya maka anya mmiri ma ọ bụ oghere.
Orient nke di akuku akuku akuku di elu (ebe eriri igwe di).
Gbaa mbọ hụ na akụkụ ihu nke nkpuchi kwesịrị ekwesị na ihu ya (n'akụkụ akụkụ nwere agba).
Debe nkpuchi ahụ ihu gị. Kechie ya ma ọ bụ mechie ọnụ nke ihe nkpuchi ahụ ka o wee kpụzie n'ụdị imi gị.
Bulie ala nke nkpuchi ahụ ka o wee kpuchie ọnụ gị na ihu gị.
Mgbe ejiri ya, wepụ ihe nkpuchi ahụ; wepu oghere ndị na-agbanwe agbanwe n'azụ ntị gị ka ị na-ewepụ ihu ahụ na ihu gị na akwa gị, iji zere imetụ ihe ndị nwere ike ịbụ ihe mkpuchi ahụ aka.
Tụfuo ihe nkpuchi ahụ n’ime ihe mechiri emechi ozugbo ejiri ya.
Mee nhicha aka mgbe ị metasịrị ma ọ bụ tụfuo ihe nkpuchi ahụ - Jiri ncha eji aka mee ihe ma ọ bụ, ọ bụrụ n ’ịta ahụ, were ncha na mmiri sachaa aka gị.
Mmadu enwere ike ibute oria COVID-19 site na anumanu?
Coronaviruses bụ nnukwu ezinụlọ nke nje na-emekarị na ụmụ anụmanụ. Mgbe ụfọdụ, ndị mmadụ na-ebute nje ndị a nwere ike ibunye ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, SARS-CoV nwere njikọ na nwamba civet na MERS-CoV bụ kamel dromedary na-ebugharị ya. Ekwesighi nnweta anumanu nke COVID-19.
Iji kpuchido onwe gị, dịka mgbe ị na-aga ahịa anụmanụ dị ndụ, zere ịkpọtụrụ anụmanụ na ihu ya na anụmanụ. Gbaa mbọ hụ na omume nchekwa nri dị mma n'oge niile. Jiri anụ, mmiri ara ehi ma ọ bụ akụkụ anụ ahụ lezie anya iji zere mmerụ nke nri a na-achọghị, ma zere iri anụ ndị anaghị eri anụ.
Ogologo oge ole ka nje ahụ dịgidere n’elu ala?
Ọ bụchaghị ogologo oge nje a na-akpata COVID-19 dị ndụ na mbara ala, mana o yiri ka ọ na-akpa àgwà dịka coronaviruses ndị ọzọ. Nnyocha na-egosi na coronaviruses (gụnyere ihe mbụ banyere nje COVID-19) nwere ike ịdabere na mbara ala ruo awa ole na ole ma ọ bụ ruo ọtụtụ ụbọchị. Nke a nwere ike ịdị iche n'okpuru ọnọdụ dị iche iche (dịka ụdị ala, ọnọdụ okpomọkụ ma ọ bụ iru mmiri nke gburugburu).
Ọ bụrụ na ị chere na ọ nwere ike ibute ọrịa dị ọcha, sachapụ ya na ọgwụ na - adịghị mfe iji gbuo nje ahụ ma chebe onwe gị na ndị ọzọ. Jiri aka n ’mmanya hichaa aka gị ma ọ bụ sachaa ya na mmiri. Zere imetụ anya gị, ọnụ gị ma ọ bụ imi gị aka.
Ọ nwere ihe m na-ekwesịghị ime?
Ihe ndị a EGO dị irè megide COVID-2019 ma nwee ike imerụ ahụ:
Ejiri otutu ihe mkpuchi
Akingụ ọgwụ nje (Lee ajụjụ nke 10 “Enwere ọgwụ ịgwọ ọrịa nwere ike igbochi ma ọ bụ gwọọ COVID-19?")
N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụrụ na ọnwere ahụ ọkụ, ụkwara na oke iku ume na-achọ nlekọta ahụike n'oge iji belata ihe ize ndụ nke ịmalite ọrịa dị oke njọ ma jide n'aka na ị ga-eso onye na-ahụ maka ahụike gị kọọ akụkọ njem gị na nso nso a.
Kwadoro site na Ajụjụ HTML5 Azịza
Ana m eji #AI ịsụgharị “Kwọọ aka gị” n’ihe karịrị narị asụsụ ise. Nke a bụ otu m si mee ya yana njikọ nke ntụgharị asụsụ: https://t.co/jkXc0ErYOc
ekele @facebookai maka ọrụ ha na MUSE, nke bụ isi ihe iji mezuo nke a!#NLProc #nje Corona @IGIHE pic.twitter.com/3zJrvST3Jc
Categories:	Covid-19Ddị AsụsụOpen AccessNkwukọrịta Sayensị
New Dawn maka ndị nyocha Afrịka dịka TCC Africa na AfricArXiv na -ekwupụta Mmekọrịta Mmekọahụ
Ụlọ Ọzụzụ na Nkwukọrịta (TCC Africa), nke hiwere na Mahadum Nairobi, Kenya, na pan-African Open Access portal AfricArXiv na-ekwupụta nkwekọrịta mmekorita anyị na ebumnuche nke imepụta usoro ogologo oge na ụzọ ga-adigide maka iwu na ijikwa obodo ndị ọkà mmụta mba ụwa nke ga -eme ka ọhụhụ nyocha Afrika dị mma.
Asụsụ ndị Afrịka ka ha nweta okwu gbasara sayensị ka mma
Science Decolonise ga-ewe ndị ntụgharị ọrụ ka ha rụọ ọrụ na akwụkwọ sitere na AfricArXiv nke onye edemede mbụ bụ onye Afrịka, onye isi nyocha Jade Abbott kwuru, ọkachamara n'ịmụ igwe nke dabere na Johannesburg, South Africa. A ga -eji okwu ndị na -enweghị nha nhata n'asụsụ a na -atụ anya ka ndị ọkachamara okwu okwu na ndị na -ahụ maka sayensị nwee ike wepụta okwu ọhụrụ. Abbott kwuru, "Ọ dịghị ka ịtụgharị akwụkwọ, ebe okwu nwere ike ịdị." "Nke a bụ mmega okwu na-emepụta okwu."